आखिर किन भाग्य न्याैपानेले रुदै माफी मागे ? हेर्नुहोस् यस्तो छ कारण !
August 5, 2020 August 5, 2020 chothale
काठमाडौं । युट्युवर भाग्य नेउपानेले बालआश्रमकी महिला पुष्पा अधिकारीलाई आफुले दुब्र्यवहार नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएका छन् । तात्तातो खबर नामको युट्युव च्यानल संचालन गर्दै आएका उनले पुष्पालाई गरेको ब्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि स्पष्टिकरण दिँदै माफी मागेका छन् । फेसवुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले माफी मागेका हुन् । लेखेको स्टाटस यस्तो छ । ‘पछिल्लो समय तात्तातो खबरको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको पुष्पा अधिकारिको अन्तर्वार्तालाई लिएर धेरैले समालोचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा धेरैले संवेदनशील विषय महिलालाई दुर्यव्यवहार र पत्रकारको आचारसंहिता को कुराहरु उठाउनुभएको छ, यस्तो संवेदनशील बिषयलाई उक्त अन्तर्वार्तामा…
समाचारभाग्य न्याैपानेLeaveacomment
प्रभुले बचाउँछन् भन्दै ५ दिनसम्म घरमै लास, गन्हाएर खाना खान नसकेपछि छिमेकीले प्रहरी बोलाए !
कैलाली – कैलालीको टीकापुर–१ गणेशपुर शिविरमा मरेको मानिस जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म लास घरमै राखिएको छ । स्थानीय दीपक चौधरीको घरभित्र शव गन्हाउन लागेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गर्दा लास रहेको रहस्य खुलेको हो । बस्ती सुरक्षा समितिका संयोजक बुद्धि दमाईले प्रहरीलाई खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरबाट प्रहरी घ’टनास्थल पुगेको थियो । शक्तिनगर शिविरका अगुवा मोतीराम डगौरा मुटुको बिरामी हुनुहुन्थ्यो । कोहलपुरमा उपचारपछि घर फर्केका मोतीरामको मृ’त्यु भएको थियो । मृ’त्युपछि पाँच दिनअघि थप उपचारका लागि पाष्टरको घर ल्याइएको मोतीरामका २१ वर्षका छोरा ईश्वर डगौराले जानकारी दिनुभएको छ ।…
काठमाडौं । उपचारमा क्रममा सन्तान गुमाएका आमाबाबुले अस्पतालबाट एम्बुलेन्स समेत पाएनन् । यो अमानवीय घटनाले अहिले दुनियाँकै ह्दय रसाएको छ । भारत, छत्तीसगढ राज्यमा कोरोना संक्रमणको कारण बन्द भएको बेलामा अस्पताल व्यवस्थापनले देखाएको यस्तो हर्कतले सबैलाई लज्जित बनाएको छ । जान्जिगीरमा दुई वर्षीया बालिकालाई सर्पले क्षति गरायो ।...
September 20, 2020 chothale 0
रक गायीका सरस्वती लामा भन्छिन् – पहिले मज्जा लिएर हेर्छन पछि छि छी गर्छन !
पाली रक गीत गाएर दर्शकसाझ चर्चा कमाउन सफल भएकी गायिका हुन् सरस्वती लामा । हाल उनी...
यिनै हुन् अस्ट्रेलियामा चक्कु लिएर लुटेरा लखेट्ने नेपाली नेपाली चेली पवित्रा कार्की !
भर्खर मात्र सार्बजनिक भएको छ “जीवन साथी”को टिजर...
September 16, 2020 chothale 0
एका बिहानै शक्तिशाली नाग देवको दर्शन गरी ॐ लेख्दै (हेर्नुहोस तपाईको आजको राशिफल)
आज मिति वि.सं. २०७७ भदौ महिनाको ३१ गते...
September 3, 2020 chothale 0
सके धनले नसके सफा मनले सक्दो शेयर गरि १६ बर्षीय चेलीको ज्यान बचाउँ
रुकुम जिल्लाको पुर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १२ कि...